Booliska Kenya oo Dad rayid ah ku Dilay Mandheera – Radio Daljir
Diseembar 28, 2015 8:36 b 0
Isniin, December 28, 2015 (Daljir) — Labo qof ayaa maanta la dilay, 3 kalena waa la dhaawacay, kadib, markii ay Ciiddanka Kenya rasaas ku fureen gaari ay la socdeen dad rayid ah oo marayey bartamaha Degmadda Mandera ee Gobalka W/bari Kenya.
Dibadbaxyo xooggan ayaa ka bilowday Mandera oo looga soo horjeedo falkaasi lagu dilay dadka rayidka ah, waxayna Dibadbaxayaashu sheegeen inay Askarta Kenya ka dambeeyeen Toogashadaasi.
Dhinaca kale, Afhayeenka Ciiddanka Kenya, Kolonel David Obonyo ayaa gaashaanka ku dhuftay arrintaasi, wuxuuna ku dooday inuu gaarigu iskiisa u qarxay, waa sida uu hadalka u dhigay.
Afhayeenka waxa uu hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu siiyey Idaacadda Capital News FM ee magaalladda Nairobi, wuxuuna yiri:- “Gaarigu wuu qarxay, waxayna u muuqataa inuu qarax saarnaa gaariga qarxay”.
Isagoo Telefoonka ku bixinayey Wareysigaasi waxa uu war been ah ku tilmaamay inay Saraakiishiisa toogteen dadka la socday gaariga.
Waxa uu intaasi ku daray inuu gaarigu qarxay, kadib, markii uu dhaafay saddex gaari oo ay Ciiddanka leeyihiin waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Sarkaal Sare oo ka tirsan Boliska Kenya oo ku sugan Mandera ayaa isaga gaashaanka ku dhuftay wararka sheegayo inay Ciiddanka toogteen dadka rayidka ee la socday gaariga.
Waxa uu tilmaamay inay weli baaritaan ku hayaan arrinkaasi, si ay u ogaadaan waxa sababay gaariga gaariga.
Saddexda qof ee ku dhaawacantay gaariga ay Askarta Kenya rasaaseeyeen ayaa la dhigay Isbitaalka Mandera, iyadoo ay ilaalinayaan Bolis hubeysan, waxaana la filayaa inay Saraakiisha Boliska Kenya ee La-dagaalanka Argagixisadda (ATPU) wareysi la yeelan doonaan Dhibanayaashaasi.
Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan inay weli dibadbaxyo ka socdaan Mandera, iyadoo ay dadku xaqiijinayaan in ay Ciiddanka Kenya toogteen dadka rayidka ee lagu dilay gaariga.
Faah-Faahin:Wada-Hadalkii Madaxweynaha iyo Bulshada Puntland